မထင်မှတ်ထားသော ဆက်နွယ်မှုအချို့ရှိသည့် တိရိစ္ဆာန် (၈) မျိုး - ONE DAILY MEDIA
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တိရိစ္ဆာန် မျိုးစိတ်အရေအတွက်ဟာ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၅.၃ သန်းမှ ၁ ထရီလီယံကြားရှိပါတယ်။ အမေဇုန်သစ်တောရှိ အင်းဆက်ပိုးမွှားလေးများအစချီကာ သမုဒ္ဒရာသို့စီးဆင်းနေသော gargantuan အပြာရောင်ဝေလငါးများအထိ သာမန်အားဖြင့် ဆက်နွယ်မှု မရှိပုံရသော်လည်း အနီးကပ်‌ေလ့လာ ကြည့်သောအခါထူးဆန်းသောဆက်နွယ်မှုများရှိပါတယ်။
လုံးဝကွဲပြားပုံရ သောတိရိစ္ဆာန်များ၏ အံ့ဩစရာကောင်းသော ဆက်နွယ်မှုအချို့ကိုတင်ပြလိုပါတယ်။
နို့၏အဓိကရင်းမြစ်မှာ ဝေလငါးဖြစ်လျှင်သင်၏နံနက်စာကိုရရှိရန်မည်မျှခက်ခဲလိမ့်မည်ကိုတွေးကြည့်ပါ တော့။ ဒါဟာအတော်လေးအပေါ်ယံဘဲ၊ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကိုတွေ့တာနဲ့မင်းအံ့သြသွားလိမ့်မယ်။
ဝေလငါးနှင့်နွားတို့မှာ ဘိုးဘွားတူများရှိခဲ့ပါတယ်။အာရှတောင်ပိုင်းတွင် Indohyus (အိန္ဒိယ၏ဝက်) ဟုခေါ် သောသတ္တဝါများ သည်အများအားဖြင့်ကုန်းနေသတ္တဝါများဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်နီးစပ်ရာမြစ်များမှာကျက်စားပါတယ်။အထောက်အထားများအရ Indohyus တို့ဟာရေကို သားကောင်များ အန္တရာယ်မှလုံခြုံသောဇုန်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ထိုါအပြင် နွားများနှင့်ဝေလငါးများ“ ဝမ်းကွဲ” ဖြစ်ခြင်းအတွက်အခိုင်မာဆုံးသက်သေမှာ ဝေလငါးများနှင့်အနီးဆုံးဆွေမျိုးများသည် artiodactyls ဟုခေါ်သော တိရစ္ဆာန်အုပ်စုဖြစ်ပါတယ် ။ထိုအထဲတွင်နွားများ၊ ဝက်များ၊ ရေမြင်းများနှင့်သစ်ကုလားအုပ်များပါ ၀ င်သည်။ အားလပ်ရက်များအတွင်း ဤအုပ်စုများ၏မိသားစု စုဝေးမှုများသာရှိပါက အတော်လေးအဆင်မပြေဖြစ်နိုင်ပုံရပါတယ်။
အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာသားပိုက်ကောင်နဲ့မင်းဘယ်သူနိုင်မယ်ထင်ပါလဲ ?? သားပိုက်ကောင်များသည်တစ်နာရီလျှင် ၄၄ မိုင်နှုန်းအထိပြေးနိုင်ပြီး Usain Bolt ၏အမြန်နှုန်းသည်တစ်နာရီ ၂၇.၇၈ မိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သားပိုက်ကောင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့လူသားများနှင့်ကွဲပြားစွာတည်ဆောက်ထားပါသလား?
မျိုးရိုးဗီဇအကြောင်းပြောရင် လူသားနှင့်သားပိုက်ကောင် DNA တို့ဟာ ငြင်းမရသောတူညီမှုများရှိပါတယ်။
သားပိုက်ကောင်များသည်သူတို့ရဲ့ ဝမ်းကွဲများဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့နှင့်ခံစားချက်တူညီမှုအချို့ရှိနေပါတယ် ။ သုတေသနများအရသားပိုက်ကောင်များသည်လူသားများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားပြီး အကူအညီတောင်း‌ လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဤအပြုအမူသည်ခွေးကဲ့သို့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များတွင်လည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။
၃) ဆင်နှင့် Manatees များ
Manatees ကိုများသောအားဖြင့်ပင်လယ်နွားများဟုခေါ်သော်လည်း ၎င်းတို့သည်“ ပင်လယ်ဆင်များ” နှင့်သာ ပိုဆင်တူပါတယ်။
Proboscideans (ဆင်များ၊ mammoths များနှင့် mastodons တို့ပါ ၀ င်သောတိရစ္ဆာန်အုပ်စု) သည် manatees များနှင့်တူညီသောဘိုးဘေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ ကြီးမားသောကွာဟချက်များရှိနေသော သော်လည်း ဤတိရိစ္ဆာန်များသည်ခြေလေးချောင်းပါနို့တိုက်သတ္တဝါ (လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၅၅ သန်းခန့်က ဆင်းသက်လာသည်) ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ဆင်များနှင့် manatees များ အမြင်အားဖြင့်ဆင်တူကြပါတယ်။ (နှာမောင်းတစ်ခုမှလွှဲ၍) သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်များသည်အမွေးအမျှင်များနှင့်ဖုံးလွှမ်းနေပြီး Manatees များ ၎င်းတို့ကိုတုန်ခါမှုကိုအာရုံခံခြင်းဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ဦး တည်ရန်သုံးပါတယ်။
(၄) Jellyfish နှင့်သန္တာကောင်
တစ်ကောင်ကကပင်လယ်နဲ့သမုဒ္ဒရာတွေမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျင်လည်ကျက်စားပြီး တစ်ခြားတစ်ယောက်ကအပင် နဲ့ပိုတူပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားက ရေခူနဲ့သန္တာနှစ်ခုလုံးကတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကဆက်စပ်နေပါတယ်။ ၎င်းတို့ဟာ Cnidarians ဟုခေါ်သောရှေးဟောင်းတိရစ္ဆာန်အုပ်စုမှဖြစ်ကာအဆုတ်နှင့်နှလုံးကဲ့သို့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများမရှိချေ။ သူတို့မှာ ဦး နှောက်မရှိသလိုသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့အာရုံကြောကွန်ယက်လည်းမရှိပါဘူး။ သူတို့သည် အနီးအနားရှိရေကူးသူများအား တစ်ခါတစ်ရံတိုက်ခိုက်လေ့ရှိပါတယ်။
သင့်ပတ်လည်မှာ အတောင်ခတ်နေတဲ့ငှက်များဟာ theropods ကနေကောက်ကျစ်တဲ့ velociraptors နဲ့ Tyrannosaurus Rex အပါအ ၀ င်ခြေနှစ်ချောင်းပါတဲ့ဒိုင်နိုဆောအုပ်စုကဆင်းသက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် T-rex ကနေအဝါရောင်ငှက်ကလေးအဖြစ် လုံးလုံးလျားလျားပြောင်းလဲမှုက နေ့ချင်းညချင်းရောက်လာမှာ‌ တော့မဟုတ်ပါဘူး။
ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့အား“ အသွင်ကူးပြောင်းရေး” မျိုးစိတ်များ အဖြသ်တင်ပြလျက်ရှိပါတယ် ။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်တရုတ်ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များက နှစ်ပေါင်း ၁၂၇ သန်းသက်တမ်းရှိ Jinguofortis perplexus ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီတွေ့ရှိမှုဖြင့် ဒိုင်နိုဆောမှ ဆင်းသက်လာသော ငှက်များ၏ ပျံသန်းမှုအတွက်အရေးပါတဲ့အချက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
(၆) Echidnas and Platypus
echidna နှင့် platypus တို့သည် monotremes ဟုခေါ်သောနို့တိုက်သတ္တဝါအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်ပြ မျိုးရိုးဗီဇဆင်တူမှုများစွာရှိသော်လည်း၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ များစွာကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် echidna သည်ပုရွက်ဆိတ်များနှင့်ခြကောင်ကဲ့သို့အင်းဆက်ပိုးမွှားများကိုစားသော်လည်း platypus သည်အသားစားသည်။
အဓိကကွာခြားချက်များစွာကလည်း သိသာထင်ရှားပါတယ်။ – echidna သည်ရှည်လျားသောနှာတံဖြင့် အရသာရှိသောအင်းဆက်များကိုအနံ့ခံပါတယ်။။ platypus ၏ပျော့ပျောင်းသောနှာတံနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်ထောင်ပေါင်းများစွာသော receptors များနှင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီးသားကောင်များကိုရှာဖွေရန်ထောက်လှမ်းသူအဖြစ်လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
မြင်းခွာကဏန်းများကို “ သက်ရှိရုပ်ကြွင်းများ” ဟုခေါ်ပြီး၎င်းတို့သည်ဒိုင်နိုဆောများထက်ပိုမိုရှေးကျပါတယ် ။ မြင်းခွာကဏန်းများသည် Chelicerata (ပင့်ကူများနှင့်ကင်းမြီးကောက်များပါ ၀ င်သော) အုပ်စုတွင်အမှန်တကယ်ရှိပါတယ်။
ဤသတ္တဝါများတွင်ထူးခြားသောဂုဏ်ရည်များစွာရှိပါတယ် ။ ဥပမာအားဖြင့်အမြင်အာရုံအားနည်းသော်လည်းသူတို့၏မျက်လုံးများသည်နေ့အချိန်တွင်ထက်ညဘက်တွင်အလင်းအား ပိုကောင်းပါတယ်။ သူတို့အကြောင်းထူးခြားဆုံးအချက်မှာသူတို့၏အပြာရောင်သွေးဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင်အဆိပ်ရှိသောဘက်တီးရီးယားများအတွက် ခုခံအားဆဲလ်များပါ ၀ င်ပါတယ်။
မြင်းဖြူမင်းသားလေးဟာကြံ့ဖြူတစ်ကောင်ပအဖြစ်‌ ပေါ်ထွက်လာရင် ရယ်စရာကောင်းပါလိမ့်မယ်။ မြင်းများနှင့်ကြံ့များသည် Odd-toed ungulate (perissodactyla) ဟုခေါ်သောအုပ်စုတူ တို့၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Cambaytherium thewissi ဟုခေါ်သောတိရိစ္ဆာန်များ၏ရုပ်ကြွင်းများကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကအိန္ဒိယတွင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ၎င်း၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများဟာ ကြံ့များနှင့်နီးစပ်သဖြင့်ဤသတ္တဝါသည်သက်ရှိ perissodactyls အားလုံးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုယုံကြည်ထားကြပါတယ်။
ဤအုပ်စုရှိတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအချက်မှာ၎င်းတို့သည်သူတို့၏အလေးချိန်ကို ဟန်ချက်ညီစေရန် အလယ် ခြေချောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုပါတယ်။
သင်ကြားဖူးသော အခြားမျိုးရိုးတူ အမည်ကွဲ တိရိစ္ဆာန်များရှိရင်လဲ ရေးသားမျှ ဝေပေးခဲ့ပါဦး။